WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka maalmood), Buug uu qoray Alle ha u naxariistee Dr. Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare)
Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka maalmood), Buug uu qoray Alle ha u naxariistee Dr. Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare)	WAASUGE IYO WARSAME (Socdaalkii 30ka maalmood), Buug uu qoray Alle ha u naxariistee Dr. Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare)
13/03/2017	962 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misna Qoraa ah.
Sheekadan waxaan kasoo qaadannay Buug uu qoray Todobaatameeyadii oo lagu magacaabo WARSAME IYO WAASUGE (Socdaalkii 30ka maalmood).
Waayaha adduunku waxay maalinkasta Dadka barayaan Dhaqan cusub. Qofkasta oo ka mid ah bulshooyinka Dadweynaha adduunkuna wuxuu halgan ugu jiraa horumarinta noloshiisa, waqti kasta iyo meelkastoo uu joogaba. Xusuusreebka dhaqan maalmeedka wadareed ee Nolosha la xiriira ayuuna ka dhashaa hiddaha sumadsooca u ah Bulsho kasta. Taas ayaana keentay dhaqan hoosaadyada la aqoonsanyahay oo ku lammaansan halganka mideysan ee Dadweynaha adduunka oo ay hoggaaminayaa cilmiga iyo farsamada dhaxeyska ah.
Dhaqan hoosaad kastaa wuxuu Bulshadiisa u leeyahay Hannaan amar la’aan laysla oggolyahay iyo Xeerar lagu kala haro. waxaana xuxun muquuniya sare u kicidda aqoonta iyo garaadka Xubnaha bulshadaas.
Sababaha kor ku xusan daraaddood maalin kasta waxaa meel kasta ka dhacaya iska hor imaad dhaqan oo ka imaanaya Qofka oo ay Noloshu baal cusub uga fureyso isla dhaqan hoosaaskiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale. Taas ayaanna buuggaan uga hadleynaa, sida iska hor imaadka dhaqamada: Shisheeyaha iyo Sokeeyaha, reer miyiga iyo reer magaalka, iyo dhalinyarada iyo waayeelka. Ujeedadu ma ahan inaan xukun ku rido fikradahaa kala duwan oo ay rumeysanyihiin dadka kor ku xusan anigoo u cuskanaya aragtideyda gaar ahaaneed waxayse tahay inaan sida ay yihiin uga run sheego, dabadeedna u daayo garaadka iyo aqoonta aqristaha kaasoo naf ahaantiisu ka tirsan kooxaha dhaqammadaa ka dambeeya.
Qisadu waxay si gaar ahaaneed uga hadleysaa una dhawreysaa anshaxa, meheradda iyo dadnimada Soomaalida, waxayna jid u fureysaa xiriirka, iskaashiga iyo isxaqdhowrka guud ahaan dadka ka dhaxeeya, koox koox iyo kelikeliba. Markale waxay si talantaalli ah fikrad uga bixineysaa furuucda dhaqanka ummaddeenna, murtikoobka suugaanta Soomaaliyeed ayaana si dhantaal la’u tusaaleynaya waxa uu dadkeennu dhaqan ahaan rumeysanyahay. Sheekada waxaa si caqli gal ah uga dheehan doontaa suugaan inteeda badan ay tiriyeen Abwaanno caan ah,waxaana hadba mushkiladda hor taal usoo daliishanaya ama ku xasuusinaya labada Oday ee Qisadu ku socoto Waasuge iyo Warsame. Gabayada qaar waxay u qoranyihiin hab murtikoob ah taas ah in mararka qaar Gabay dheer laga soo qaato dhawr beyd oo midba meel yahay isla markaana ku siinaya murtikoobkii gabayga.
Sheekada waxaa door weyn ka qaadanaya ina Waasuge oo la yiraahdo Muuse, ahna Wiil muddo dheer dibadda wax ku baranayay, qabana naag Talyaani ah. Waxaa asaguna sidoo kale door uga qaadanaya Sarkaal xoogga Dalka ah oo la yiraahdo Dirir, lana dhashay Warsame.
Xagga heerka erayada uu Buuggu ku qoranyahay waxaa loo dooray qaar la wada garan karo, laguna dadaalay in mid walba loo isticmaalo halka uu ku habboonyahay. Suugaanta oo kala af guri ah awgeed, wuxuu akhristuhu la kaashanayaa erayfariska hoos ka raacsan.
La soco Qeybta 1-aad, Berri haddii Alle idmo.
Previous: Kenya oo sababo amni darteed u joojisay dhismaha Safaaradeeda Muqdisho
Next: Dhacdo Naxdinleh: Nin Xaaskiisa oo u dhashay 7-Carruur ku gowracay degmada Guraceel..